‘रेल र जेल’ का कुरा धेरै नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्रकार रवि लामिछानेको चुनौती – Todays Nepal
‘रेल र जेल’ का कुरा धेरै नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्रकार रवि लामिछानेको चुनौती
By Todays Nepal | नेपाल आज	 Last updated Jul 13, 2018
सरकारले ल्याएको नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीबारे केहि बिषेश अनि महत्वपुर्ण कुरा राख्न चाहान्छु । संमृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेको कुनै नारा लगाएर अथवा अभियान नै चलाएर सार्थक पार्नु पर्ने बिषय नै होइन ।
कन्त विजोगमा परेका हरितन्नम देश र गरिबीको पराकाष्ठा नाघेका अनि स्रोत साधनको नाममा केहि नभएका टक्कन टाट मुलुकलाई भए यो नारा महत्वकांक्षी वा अभियान नै बनाउन पर्ने नारा हो । प्रकृतिले दिनु विधि दिएको यति सम्पन्न देशले संमृद्धिलाई सपना बनाउनु पर्छ ?
यस्ता देशका हामी नागरिकले सुखी हुन सपना देख्नु पर्छ ? १, २, ३ पर्दैन । पढ्नु विधि पढेका अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्री र अन्य कयौं शास्त्रीहरुको कुरालाई अर्को तिर राखौँ । ज्ञान विज्ञानका सारा किताब कन्ठस्थ पारेका अरु थप तर्क शास्त्रीहरुको कुरा पनि एकै छिनलाई अलि परै राखौ र केवल सर्वसाधारण हिसाबले सोचौ ।
भ्रष्टाचार निर्मुल नभएपनि नियन्त्रन्त्रण नभई र हामीसँग भएका स्रोत साधनको उपयोग नभई जसले जति मोटा किताब पढेपनि बिकास आउँदै आउँदैन । भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा विश्व परिवेशलाई हेरौँ । पाकिस्तानका पुर्व प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार मुद्धामा समातिए र १० बर्षका लागि जेल गए ।
कोरियाकी पुर्व प्रधानमन्त्री २४ बर्षका लागि जेल गईन, मलेशियाका पूर्व प्रधानमन्त्री २० वर्षका लागि जेल गए । यो लिष्ट निकै लामो छ । के नेपाल चरम भ्रष्टाचारले गर्दा गरिब भएको होइन ? भ्रष्टाचार गरेर अकुत कमाएकाहरु अझै जिउदै छन्, अझै पावरफुल छन् अझै देशका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग कुममा कुम जुधाएर सेल्फी खिच्दैछन् ।
भ्रष्टाचारी कतिजना जेल गए ? समात्ने आँट नभएको कि प्रमाण फेला नपरेको कि आफु पनि संलग्न भएका कारण चुपचाप लागिएको ? मुलुकको त्यत्रो भ्रष्टाचार गरेको पैसा के अब पच भएको हो ?
जब ‘दिलबर दिलबर…’ गीतमा कम्मर मर्काइन् यी युवतीले (भिडियो)
सुहागरातमा पतिले गरे यस्तो काम, ५ दिन भइसक्दा अझै बेहोस छिन् नवविवाहिता पत्नी